काठमाडौं –सप्तरीको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद डाक्टर सूर्यनारायण यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष राजीनामा बुझाएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच बनेको चुनावी गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित यादवको राजीनामाबारे उनकै दल समाजवादी पार्टी नेपाल (तत्कालीन फोरम) समेत अनविज्ञ रहेको दलका कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ ।
यादवको राजीनामालाई नवगठित जनमत पार्टीका संयोजक सीके राउतलाई संसद्‍मा ल्याउने प्रयासका रूपमा लिएर समेत कतिपयले चर्चा गरिरहेका छन् ।
यादवको राजीनामा स्वीकृत त भइसकेको छैन, तर उनले फिर्ता नलिएको अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत गर्नुको विकल्प सभामुखसँग रहने छैन ।
सीके राउतको पनि स्थायी ठेगाना सप्तरी नै भएकाले यो प्रकरणमा उनलाई जोडिएको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र मधेशभन्दै अभियान चलाएका राउत मूलधारको संसदीय राजनीतिमा पाइला टेकेपछि यो वा त्यो कारणबाट सञ्चारमाध्यमहरूका लागि 'हटकेक' बन्ने गरेका छन् ।
सप्तरी १ खाली भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलेका राउत अहिले कतारमा छन् ।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंह भने यसविषयमा पार्टीभित्र कहीँ कतै छलफल नभएको दाबी गर्छन् । 'समाजवादी पार्टीका सांसद सूर्यनारायणजीले राजीनामा साँच्चिकै दिएको हो कि होइन, स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि प्रस्ट छैन,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सिंहले भने, 'यसबारेमा अहिले पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका मात्र हुन् ।'
यादवले राजीनामा दिएपछि अधिकांश मधेशकेन्द्रित पत्रकारहरूले सो क्षेत्रबाट राउत उठ्न खोजेको दाबीसहितका अपुष्ट समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका थिए ।
समाजवादी पार्टीका महासचिव प्रशान्त सिंह भने सीके राउतसँग जोडेर भएको चर्चालाई हल्ला मात्र मान्छन् ।
'यादवजीले आफू मेडिकल डाक्टर भएको र राजनीतिमा खासै समय दिन नपाएकाले राजीनामा गरेको जानकारी हाम्रो अध्यक्षलाई गराउनुभएको रहेछ,' सिंहले भने, 'हिजो बसेको कार्यकारिणी बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँ संसद्‍मा पनि त्यति धेरै उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन । मैले पद ओगटेर बसेर मात्र भएन भनिरहनुहुन्थ्यो ।'
राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा पछि के हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने सिंह बताउँछन् ।
'राजीनामा स्वीकृत भइहाल्यो भने पनि उपनिर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले नै आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ नि !' सिंहले थपे, 'राउत वा अन्य कुनै व्यक्ति ल्याउने विषयमा छलफल होइन, सोच्न पनि सकिन्न ।'
राजीनामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो– लक्ष्मणलाल कर्ण
प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरिसकेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सांसदको राजीनामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताए ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति समेत रहेका सांसद कर्णले लोकान्तरसँग भने, 'सांसदमध्ये कसैले राजीनामा दिन चाहने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । उहाँ यादवजीले राजीनामा दिनुभएको छ भने, त्यसलाई सूचना बोर्डमा टाँसिन्छ । पार्टीभित्र उहाँको छलफल होला, केही सहमति होला भने त्यो पार्टीगत कुरा भइहाल्यो, तर सांसदले जसरी पनि राजीनामा दिन्छु भनेको छ त्यो स्वीकृत हुन्छ ।'
उपेन्द्र/महन्थलाई काउन्टर दिन नेकपाले खडा गरेको पात्र !
गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड समेतको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रममा राउतले आफू मूलधारको राजनीतिमा आएको घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा विविध अड्कलबाजीहरू भएका थिए ।
राउत नेकपा प्रवेश गर्न खोजेको समेत चर्चा भएको थियो ।
त्यसअघि जेलमा रहेका राउतलाई भेट्न सत्तारूढ दलका नेताहरू नै पुगेका थिए । राउतलाई नेकपाको संरक्षण रहेको त्यतिबेलैदेखि चर्चा चल्न शुरू भएको हो ।
११ बुँदे सहमति भएको एक दिनअघि राज्य विप्लवको मुद्दा लागेका सीके राउतलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
समाजवादी पार्टीका एक नेताले राउत नेकपाले खडा गरेको पात्र भएको आरोप लगाए ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले लोकान्तरसँग भने, 'महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवजस्ता ठूला नेतालाई साइजमा ल्याउन नेकपाले राउतलाई खडा गरेको हाम्रो आन्तरिक बुझाइ छ । यो अवस्थामा हामीले हाम्रो सांसदलाई राजीनामा दिन लगाउने र राउतलाई टिकट दिलाउने काम हुनै सक्दैन । यदि त्यसो भयो भने हाम्रो पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्छ ।'
राउतलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा र राउत स्वयंको 'भद्र सहमति' पनि भएको उनले खुलासा गरे । यादवले दिएको राजीनामा उनको व्यक्तिगत रोजाई र पार्टीको आन्तरिक विषय भएको दाबी उनको छ ।
यादवको राजीनामामा राउतको प्रसंग जोडेर नेकपाले नै समाजवादी पार्टीको चरित्रहत्या गर्न खोजेको आफ्नो बुझाई रहेको उनले बताए ।